Nyanzvi Dzopesana Mabudiro Achaita Referendamu
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, VaIbbo Mandaza, vesangano reSouthern African Political Economic Series Trust, vanoti vanhu vemuZimbabwe vari kuzotambira bumbiro idzva remitemo yenyika pareferendamu sezvo mapato ese ari muhurumende ari kuda bumbiro idzva.
Vachipa pfungwa dzavo pamusangano wanga wakarongwa neMedia Centre muHarare nechinangwa chekuti vemasangano anoshanda akazvimirira nevatori venhau vangadyindzane seyi mukusimudzira dunhu rekuchamhembe kweAfrica, VaMandaza vati pane kuwirirana kukuru muZanu PF nemapato maviri eMDC panyaya yebumbiro idzva. Vati havaoni bumbiro iri richirambwa pareferendamu iyo iri kutarisirwa kuitwa gore rino risati rapera.
VaMandaza vatiwo chimwe chichaita kuti bumbiro iri risarambwe inyaya yekuti veruzhinji kubva kumapato ese ari muhurumende havachada mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, uye vanofunga kuti bumbiro idzva ndiro richaita kuti vabviswe pachigaro.
Vati zviri pachena kuti bumbiro iri rakanyorwa pachitevedzwa zvematongerwo enyika uye richabudirira sezvo chibvumirano cheGlobal Political Agreement chichiti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo pasi pebumbiro idzva.
Asi sachigaro weNational Constitutional Assembly, kana kuti NCA, VaLovemore Madhuku, vati havabvumirani naVaMandaza panyaya yekuti bumbiro richabudirira pareferendamu. Vati sangano ravo rave kutokurudzira veruzhinji kuti varambe bumbiro iri.
Vati vanhu vacharamba bumbiro iri nekuda kwekuti harina kunyorwa neveruzhinji uye kuti harikoshesi zvido zveveruzhinji.
Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions inotungamirwa naVaGeorge Nkiwane, Va Japhet Moyo, vati sangano ravo rinoda kuti MDC imbopihwe mukana wekutonga kunyange pasati pasandurwa mitemo munyika.
VaMoyo vati sangano ravo harifungi kuti bumbiro riripo rakanyanya kushata vachiti sarudzo dzinofanira kuitwa kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Vanoona nezvekudyidzana nemamwe masangano musangano reCrisis Coalition in Zimbabwe, VaNixon Nyikadzino, vatiwo masangano anoshanda akazvimirira munyika haasati atora danho rekuti achatsigira bumbiro idzva here kana kuti kwete pareferendamu. Vati danho iri richatorwa pamusangano uchaitwa munguva pfupi inotevera.
Komiti yeparamenmde iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva, yeCOPAC, iri kuronga kuita musangano wekuti veruzhinji vazeye kuti zviri mubumbiro iri ndizvo here zvavakataura kana kuti kwete pamusangano wesecond all stakeholders.
Musangano uyu unotarisirwa kuitwa mwedzi uno, mushure mezvo, kuzoitwa referendamu.